Shina 219H KART CHAIN ​​Fividianana sy mpanamboatra | Tongbao
Mandehana any Chassis Kart
Mandehana anjara amin'ny Kart
Trano ho an'ny fanondranana Axle
Kodiarana amin'ny kodiarana
MANDROSO NY FANDROSOANA KART
High Performance CNC Machining Aluminum 7075 Alie 2 ...
ZAVA-DEHIBE NY KART NYLONA
MANDROSO KOKOA 4F HO AN-TRANO FOANA
MANDEHANA KOKOA FIVORIANA 3F AN-TRANO FARANY
MANDROSO TOKONY MAIMAIM-PIVONDRANA HALEFA KARANA
HITANAO MPIASA KART
HANOKO FOTOTRA FOTSOTRA FOTOTRA
HITAN-DAHADOLANA CLIP CABLE
Mandehana KUB HUB MANAO AN-TRANO WHEEL
Mandehana KX AXLE COLLAR miaraka amin'ny KEYWAY
219H KART NO
2.Engine: Mitsoka rivotra
3.Drive Mode: CHAIN ​​DRIVE
4. haben'ny elatra: Front 10 10 4.5-5 "； Rear 11 * 7.1-5"
5.Ny kapila mitobaka: 30L
6.Mabily hafainganam-pandeha: 3600RPM
Type Type: Brake hidraulika
9. Fampiasana: Ho an'ny fampiasana Go Kart
10.Warranty: warranty 1 taona ho an'ny karazana vokatra rehetra
11.Origin: Jiangsu, Sina (Mainland)
Item No. dity Width Link Width Bushing Diameter Ny fahatokisan'ny Plate rohy Herin'ny rindrin'ny rohy mampitohy Pin Diameter Lava Pin
Herin'ny tensile mahery
KMC 7,774 5.00 4,59 1.20 7.50 (MAX) 3,01 11,70 750
OEM 7,774 5.00 4,59 1.20 7,60 3,01 12 7.9KN
Ireto famantarana sy saina famantarana ireto dia hampiasaina:
- Fambara hazavana hazakazaka: jiro mena no napetraka ambonin'ilay hazavana maintso. Jiro mena: nakatona ny lalana. Jiro maitso: misokatra ny làlana.
- Sainan'ny maitso: azo idirana ny làlana. Manomboka famantarana sy fotoana fiomanana ny tadino.
- Sainam-pirenena maintso ary marika mavo mitodika mavo: misy miolomay.
- Sainam-manga: mitazona: manondro fa manaraka ny fiarahany mpamily ny mpamily. Gel: manondro fa manana mpamily hafa haleha ny mpamily. Ny lalàna dia manambara fa tsy maintsy manome lalana ny mpamily.
- Sainam-banitra: mbola: loza mialoha ny làlambe, mihemotra, tsy misy ahitam-bokatra. Wave: mialoha ny lozam-pifamoivoizana dia mety mila mijanona, tsy misy fahatongavana.
- Sainam-pirenena mainty misy boribory volomboasary (miaraka amin'ny laharana mpamily): tsy fahombiazan'ny teknika ilay fiara, tsy maintsy miditra ao anaty lavaka ny mpamily rehefa avy nandalo ny fivoahana ny fiarovana.
- Sainam-bokatra fotsy: ambasondoha amin'ny lalana, miadana
- Sainam-banitra misy kofehy mena: ny lalana dia lena miaraka amin'ny menaka, rano na rano hafa (mihazona ny saina amin'ny refy iray amin'ny tanana ny referee, aseho mandritra ny 4 latsaka izany na saika averina amin'ny laoniny ny làlana).
- Sainam-mena: nakatona ny lalana, nijanona ny mpamily rehetra.
- Sainam-mainty: tsy maintsy miverina eo amin'ny faritra mihidy avy hatrany ary mitantara amin'ny talen'ny hazakazaka.
- sainam-bokatra Mena marika eo amin'ny lafiny manga (miaraka amin'ny laharana mpamily): nofehezin'ny mpamily voalohany tao amin'ny hazakazaka. Tsy maintsy miverina amin'ny faritra fikojakojana ny hampitsahatra ny hazakazaka rehefa avy nandalo ny fivoahan'ny hazakazaka.
- Sainam-paositra mainty sy fotsy: milalao.
- Sainan'ny diagonaly mainty / fotsy (misy ny isan'ny mpamily): fampitandremana ho an'ny mpamily iray amin'ny fihetsika tsy mitongilana alohan'ny aseho ny saina mainty.
Production & fonosana
Previous: ALUMINUM WHEEL
Manaraka: 7075 ‐ T6 # 219 PITCH KART SPROCKET
1. Q: Inona ny habetsaky ny filaminana faran'izay kely indrindra?
A: Mihoatra ny 50 pcs no ekena.
2. F: Ahoana ny momba ny Term?
A: Izahay dia manaiky T / T, Western Union, Paypal ary Credit Card amin'ny Internet.
3. Q: Afaka afangaro ny vata 20FT ve isika?
4. Q: Azontsika atao ve ny mampiasa ny serivisy fitaterana entana?
A: Eny, azonao atao izany. Niara-niasa tamin'ny mpanolotsaina maro izahay. Raha ilainao dia afaka manome soso-kevitra aminao izahay ary azonao atao ny mampitaha ny vidiny sy ny serivisy.
5. Q: Seranan-tsambo fitaterana anay?
6. Azontsika atao ve ny mampiasa ny LOGO manokana na ny famolavolana kitikitika?
A: Eny, afaka mifandray amin'ny mpivarotra ianao, ary handefa antsipirihany bebe kokoa momba ny LOGO na sticker.
7. F: Afaka atomboko amina santionany na baiko kely fotsiny ianao hanandrana izany?
A: mazava ho azy. Tianay ny hataonao. Aorian'ny fampiasana dia ho hainao kokoa ny momba ny kalitaon'ny vokatra ataontsika. Ary tena atokisanay tsara ny vokatra.
8.Q: Ahoana ny fomba hanafarana?
A: Dingana 1, azafady mba lazao anay ny modely sy ny habe ilainao;
Dingana 2, dia hanao PI aminao izahay hanamarina ny antsipirihany baiko;
Dingana 3, rehefa nohamafisinay ny zava-drehetra, dia afaka mandamina ny fandoavana;
Dingana 4, farany dia manolotra ny entana ao anatin'ny fotoana voatondro isika.
9.Q: Rahoviana no hanao fanaterana?
A: Fotoana fandefasana
-Ny baiko: 1-3 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavana manontolo.
-Ny baiko: 3-7 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavana manontolo.
-OEM baiko: 15-30 andro aorian'ny nandraisana ny petra-bola.
10.Q: serivisy aorian'ny varotra
Fananana zom-taona mandritra ny vokatra isan-karazany;
Raha mahita kojakoja mandeha maloto voalohany ianao, omenay anao ireo faritra vaovao maimaimpoana hanoloana ny fandaharana manaraka, amin'ny maha-mpanamboatra za-draharaha anao, afaka matoky ny kalitao sy ny serivisy aorian'ny varotra ianao.
11.Q: firy ny vokatra azontsika?
A: vokatra 200 mahery samihafa.
Mandehana Fitaovana Kart Chain
Clutch Centrifugal Cl 20ch Tooth 3/4 ...
No. 8 Jiefang North Rd. 214005, Wuxi, Sina.
Mandroso ny fampiroboroboana ny taom-baovao, stock maro no miandry anao！
Fiaraha-miasa voalohany amin'ny Karting Cindy
Cindy, namanay tsara dia nahita traikefa tamin'ny fahitana voalohany tany Wuxi, Jiangsu.She nahita fa tena mahafinaritra sy mampientam-po izy. Nilaza izy fa hilalao indray. Tovovavy tsara tarehy toy izany!
WW Event in Orlando dia lasa toe-javatra lehibe ho an'ny mpifaninana amin'ny 2020
Satria maro ireo andiany izay manomboka amin'ny zava-niseho voalohany tamin'ny 2020, ny World Karting Association dia manohy mandroso hatrany amin'ny hetsika faharoa amin'ny vanim-potoana. Nantsoina hoe 'Destination: Orlando', fijanonana manaraka ho an'ny W ...
Nifindra tany Charlot ny boriborintany fahatelo an'ny amboara mpamokatra WKA ...
Nambara tamin'iny herinandro lasa iny fa ny hetsika manerantany an'ny orinasa Karting Association Maneran-tany ho an'ny 17-19 Aprily dia hatao ao amin'ny Charlotte Motor Speedway any Concord, North Carolina, nanamafy ny laharana faharoa ny tompon'andraikitra andiany faharoa ...